The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) is set to remove over 22 000 names of people believed to be deceased from the voters roll.
The list has 22 656 names and covers the period from 2017 to 2019.
ZEC chief elections officer Utoile Silaigwana issued a public notice dated 22 November 2021, in which he said those that have been listed will be removed from the Voters Roll unless an appeal is lodged with ZEC. The notice read:
It is hereby notified, in terms of section 33(4) read with section 27(1) of the Electoral Act [Chapter 2:13], that voter registration officers have reason to believe that the persons whose names are listed in the First Schedule, and who were registered as voters for the constituencies, wards and polling stations listed therein have died.
By means of this notice, notification is made to any voter on the First Schedule who may be alive to lodge an objection at the Zimbabwe Electoral Commission Mahachi Quantum 1 Nelson Mandela Avenue, corner Kaguvi Street and Jason Moyo Avenue, Harare and at the respective Commission Provincial Offices, to the inclusion of his or her name in the First Schedule using the form prescribed no later than seven days from the date of publication of this notice.
Samere 6 months ago
Bvisai nevese vakaenda diaspora especially vari UK neJoza, vanonyanya kugona kuvhotera pa social media pa ballot havawanikwe, saka vakangofananawo nevashakabvu
Havasikuda kubvisa madeceased muvoters roll.I have not be issued my mum's death certificate,she passed on in January,2020.The RG'S office is demanding unnecessary documents,such as two birt certificates of two deceased child.
Yaa tentin uri serious wena, iye munhu afunga zvekubisa vashakabvu adii kumirira politbro ne commis ariate
Guys yaaa this time Handi vote nhayi ndakafa long back ndayingo vota
Taikumbirawo kuti Pindula I publish mazita acho e 1st schedule